Al-Shabaab oo toogatay afar nin oo ay ku eedaysay in ay la shaqeeyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo toogatay afar nin oo ay ku eedaysay in ay la shaqeeyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Isha Sawirka: AFP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa toogatay afar nin oo ay ku eedeeyeen in ay la shaqeeyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Toogashada ayaa ka dhacday goob fagaare ah oo kutaala degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose gelinkii dambe ee Axada, sida ay sheegeen warbaahinta Al-Shabaab.
Kooxda ayaa sheegtay in labo kamid ah afarta nin ay basaas u ahaayeen sirdoonka dowladda Soomaaliya, halka labo kale ay ahaayeen askar katirsan ciidamada xooga dalka.
Dowladda Federaalka kama aysan hadlin toogashada ay geysatay maleeshiyada Al-Shabaab oo dagaal kula jirta.
Ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa marar badan oo kala duwan toogasho ku fulisay dad ay sheegtay in ay la shaqeeyaan haayadaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wakaalado sirdoon oo ajnabi ah.
Itoobiya oo diblomaasiyiin sare u soo dirtay Soomaaliya si ay gacan uga geystaan ololaha Xasan Shiikh
Muqdisho-(Puntland Mirror) Itoobiya ayaa diblomaasiyiin sare u soo dirtay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si ay taageero uga geystaan dib u doorashada Xasan Shiikh Maxamuud, sida warsidaha Puntland Mirror ay u xaqiijiyeen ilo-wareedyo codsaday in aan [...]
Dhaarinta xildhibaanada cusub ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee DFS oo ka bilaabmatay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dhaarinta xildhibaanada cusub ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah ka bilaabmatay magaalada Muqdisho. Waxay muujinaysaa tilaabo horey loogu qaaday kadib doorashada dalka oo dib [...]